Wararka - 2020 waa sanad gaar ah, COVID-19 ayaa ku faafaya adduunka oo idil laga bilaabo bilowga sanadka
Si lama filaan ah, 2020 waa sanad qaas ah, COVID-19 wuxuu ku faafayaa adduunka oo dhan bilowga sanadka. Dadka Shiinaha oo dhami waxay ku noolaayeen xaflad aan caadi ahayn oo guga aamusnaan ah, waxna kama cunaan waxna kama iibsan karaan, lama kulmin saaxiibo ama booqashada qaraabada. Aad ayey uga duwan tahay sidii hore！
Waad ku mahadsantahay dowladda Shiinaha, faafitaanka si wanaagsan ayaa loo xakameeyay, talaabo talaabo, warshadaha ayaa loo furay mid mid.
Aad baan u walwalsaneyn markaan guriga joogno, maxaa yeelay waxaan saxiixnay mashruuc weyn wax yar ka hor xafladaha guga, oo leh waqti gaarsiin adag. In kasta oo fayrasku yahay mid lama filaan ah, haddana ma jeclin inaan la daahno sabab kastoo jirta. Markaa laga bilaabo maalinta aan shaqada bilawno, dhammaan shaqaaluhu si aad ah ayey u wada shaqeeyaan, maalin kasta shaqadoodu way badan tahay, si ay ula qabsadaan waqtiga dhalmada.
Ugu dambayntii, waanu dhammaynay qaybtii ugu horreysay, 4pcs oo durbaanno ah ayaa diyaar u ah inay dibadda u baxaan. Bal eeg! Sidee bay u qurux badan yihiin! Wadaagista dhalaalka dahabka ah, sida loogu faano dhammaan shaqaalaha Stamina! Macaamiilkeennu sidoo kale aad buu ugu faraxsan yahay inuu maqlo waxa ku saabsan, warbixinta QC waxay muujineysaa in dhammaan xuduudaha ay u qalmaan, waxay ku heli karaan hal bil gudaheed, waa wax xiiso leh! Weli waxaa jira in ka badan 50pcs in la dhammeeyo, iyo COVID-19 ayaa wali saameyn nagu leh, Shaqaalaheennu kuma filna, shaqaale badan ayaa ka bixi kari waayey gurigooda illaa fasaxa si ay uga fogaadaan khatar kasta. laakiin waxaan aad ugu kalsoonahay, waxaan u qaabeynay jigs wax ku ool ah si looga dhigo kulanka waxtarka sare, geeddi socodka oo dhan waa siman yahay oo xirfad leh. Shaqaalaheenu ma dareemayaan daal inkasta oo shaqadoodu maalin kasta badato, shirkadu sidoo kale waxay isku daydaa intii karaankeeda ah inay siiso shaqaalaha jawi raaxo leh, oo leh suxuun dhadhan fiican leh iyo kafeega qaxwada iyo cunnada fudud
Mar labaad fiiri durbaannada qumman, iyagu waa cillad eber ah. Sidee xoogan kooxdu! Waa wax la isku halleyn karo oo wax ku ool ah, oo u qalma kalsoonidaada!